Herinandron'ny fampahafantarana ny fizahan-tany hifantohana amin'ny fizahan-tany ho an'ny fitomboana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Herinandron'ny fampahafantarana ny fizahan-tany hifantohana amin'ny fizahan-tany ho an'ny fitomboana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao Mafana Jamaika • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Resorts • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Mankalaza ny Andro eran-tany ho an'ny fizahantany i Jamaika
Ny Ministeran'ny Fizahan-tany any Jamaika, ny orinasam-panjakana ary ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany, ao anatin'izany ny Jamaica Hotel and Tourist Association (JHTA), dia hanasongadinana ny andraikitra lehibe raisin'ny fizahan-tany amin'ny fampiroboroboana ny fampidirana sy ny fitomboana ara-toekarena rehefa mandinika ny Herinandron'ny fahatsiarovan-tena izy ireo (TAW) 2021.
Ny hetsika amin'ity taona ity dia fankalazana ny fahafahan'ny fizahan-tany mitondra fampandrosoana mivelatra ary manome tombony ho an'ny olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao.
Mandritra ny herinandro dia hampiasa ny pirinty sy ny haino aman-jery elektronika ny Minisitra mba hanasongadinana ireo hetsi-panoloran'izy ireo.
Ny hetsika hafa dia misy fampirantiana virtoaly amin'ny 27 septambra, kaonseritra virtoaly amin'ny 1 Oktobra, ary fifaninanana horonantsary ho an'ny tanora.
Ny fankalazana amin'ity taona ity dia hampiditra ny Andro Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany, izay marihina isan-taona amin'ny 27 septambra avy amin'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO) sy ireo toerana itodiana manerana an'izao tontolo izao. Ny andro dia hojerena eo ambanin'ny lohahevitra "Fizahan-tany ho amin'ny fitomboana", izay koa ho lohahevitra ho an'ny TAW 2021, kasaina hatao ny 26 septambra hatramin'ny 2 oktobra.
Hankalazana ny fahaizan'ny fizahan-tany handroaka ny fampandrosoana izany ary hanome tombony ho an'ny olona an-tapitrisany maro manerantany.
Araka ny lazain'ny UNWTO: "Ity dia fotoana iray hijerena mihoatra ny statistikan'ny fizahantany ary hanaiky fa ao ambadiky ny isa rehetra, misy olona… Fankalazana ny fahaizan'ny fizahan-tany manokana mba hahazoana antoka fa tsy misy olona tavela rehefa manomboka misokatra indray izao tontolo izao ary mijery amin'ny ho avy. ”
Hanomboka amin'ny alàlan'ny fotoam-pivavahana fiangonana virtoaly ny herinandro ny alahady 26 septambra. Mandritra ny herinandro, ny Minisitera sy ny orinasam-panjakana dia hampiasa ny haino aman-jery pirinty sy ny fitaovana elektronika hanasongadinana ireo hetsi-panentanan'izy ireo izay mampiroborobo ny fitomboana. Ny hetsika hafa dia misy fampirantiana virtoaly amin'ny 27 septambra, kaonseritra virtoaly amin'ny 1 Oktobra, ary fifaninanana horonantsary ho an'ny tanora.
Ny minisitry ny fizahantany Hon. Nanamarika ny maha-zava-dehibe ny lohahevitra i Edmund Bartlett ary nizara fa ny tanjon'ny Minisiterany dia "ny famoronana vokatra fizahan-tany hatrany amina fizarana tombony be dia be amin'ny fiaraha-monina." Nasongadiny fa: "Ny fizahantany dia momba ny tantsaha, mpivarotra asa-tanana, mpampiala voly ary mpamatsy fitaterana toy ny momba ny hotely, ny trano fisakafoanana ary ny mpandraharaha manintona."
“Ny fizahantany dia iray amin'ireo indostria lehibe indrindra sy mitombo haingana indrindra eto an-tany ary loharanom-bola lehibe ho an'ny firenena maro. Any Jamaika, ny fizahan-tany no mofo sy diberinay. Ny fizahantany no masinin'ny toekarentsika. Miteraka asa, manintona ny famatsiam-bola avy any ivelany, mandrisika ny fampandrosoana fotodrafitrasa manakiana, ary mampiroborobo ny varotra amin'ny sehatra maro. Ny tena zava-dehibe dia ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny harinkarena sy ny fivezivezena ara-tsosialy, ”hoy ihany izy.
Na dia ny fitomboan'ny sehatra aza dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny valanaretina COVID-19, izay nanelingelina hetsika ara-toekarena manerantany, Nanantitrantitra i Bartlett fa ny faharetana sy ny tsy fitoviana dia zava-dehibe amin'ny fizotry ny fanarenana.
"Ny firakofana volafotsy dia ny krizy COVID-19 izay nanararaotra nanangana sary an-tsaina sy nanangana an'ity indostria maharitra ity hahatratra ity mandat ity. Ny faharetana sy ny tsy fitoviana dia tafiditra ao anatin'ny fizotry ny fanarenana. Noho izany, rehefa manararaotra ireo fotoana mety hisian'ny krizy isika dia mampihatra fepetra stratejika hanarenana ny vokatra azo antoka, ara-drariny ary hiteraka fotoana ara-toekarena ho an'ny Jamaikana salantsalany, ”hoy izy.